Rose of Sharon: ရောင်စုံလူသားများနှင့်ကမ္ဘာ
Posted by rose of sharon at 6:41 AM
mstint November 12, 2011 at 9:10 AM
ရောင်စုံလူသားများနှင့်ကမ္ဘာအကြောင်းကို ရောင်စုံဒဿနလေးတွေနဲ့ ဖော်ညွှန်းသွားတာလေး ဖတ်သွားတယ် Rose ရေ။
it's so high thinking for me.
Me don't understand anymore, hee hee ! but very good writing, can't deny that.
မအိမ်သူ November 12, 2011 at 11:02 AM
ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ အတွေးတွေအမျာကြီး တွေးဖြစ်သွားတယ်။ အပေါ်ယံကြည့်လိုက်ရင် သာမာန် စိတ်ကူးယဉ် အကြောင်းအရာတစ်ခုလိုထင်ရပေမယ့် ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း အတွေးနက်နက်တွေကိုပေးနိုင်တဲ့ စာလေးပဲ။ အရမ်းကောင်းတယ်ညီမ..
ပိုးပိုးရဲ့ရိုက်ချက် November 12, 2011 at 1:46 PM
I like this post, Ma Ma Naw.
အပြုံးပန်း November 12, 2011 at 7:55 PM
ရေးထားတဲ့ စတိုင်လ်ကို သဘောကျမိတယ်။
Nyi Linn Thit November 13, 2011 at 3:09 AM
အရောင်တွေကြားထဲက ခပ်ဒန်ဒန် ပို့စ်ပါလား၊း)
ကြည့်ဖူးတဲ့ ကာတွန်းကားလေး သွားသတိရတယ်ဗျ၊ အဲဒီထဲမှာတော့ ဓါတုမိုး ရွာလိုက်လို့ အရောင်တွေအားလုံး ကျွတ်ကျသွားတာ....။
rose of sharon November 13, 2011 at 10:25 AM
မအိမ်သူ... အတွေးနက်နက်တွေးပြီး ဖတ်ပေးသွားတာကျေးဇူးပါနော်..
အပြုံးပန်း.. အတွေးတခုခုရှိပါတယ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ညီလင်းသစ်... အတွေးလွန်သွားပြီး ဒန်မိသွားတယ်... :D
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! November 14, 2011 at 7:05 PM
မြသွေးနီ November 15, 2011 at 2:23 PM
အဖြူရောင်ကမ္ဘာကြီးဆီ သွားဖို့ လမ်းပြပေးပါ...။
rose of sharon November 19, 2011 at 12:47 PM
မြသွေးနီ... ကိုယ်လဲရောင်စုံကမ္ဘာထဲက ရောင်စုံလူသားတစ်ယောက်ပါဘဲ...